VIRTUALBOX MEBERE MACHINE MAKA BEGINNERS - N'IHI BEGINNERS - 2019
Nduzi nke onye mbu a ga-achikota otu esi emeputa ma hazie igwe akwara VirtualBox (software zuru oke maka oru na igwe di iche iche di na Windows, MacOS, na Linux), tinyere nuances nke iji VirtualBox nke nwere ike bara uru. Site na ụzọ, na Windows 10 Pro na Enterprise enwere ngwaọrụ ndị a rụpụtara iji rụọ ọrụ igwefoto, lee ngwaọrụ Hyper-V nke dị na Windows 10. Cheta: ọ bụrụ na kọmputa nwere Hyper-V components arụnyere, mgbe ahụ, VirtualBox ga-akọ na ọ bụ njehie. igwe igwe di iche iche, otu esi aga gburugburu: Gbaa VirtualBox na Hyper-V n'otu usoro.
Kedu ihe ọ ga-achọ maka? Ọtụtụ mgbe, a na-eji ígwè ọrụ arụmọrụ amalite ndị sava ma ọ bụ iji nwalee ọrụ nke mmemme na usoro dị iche iche arụ ọrụ. Maka onye ọrụ novice, ohere a nwere ike ịba uru ma ịnwale usoro na-amaghị nke a na-arụ ọrụ ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, iji na-agba ọsọ mmemme n'enweghị ihe ize ndụ nke ibute nje na kọmputa gị.
Ịnwere ike ibudata ngwanrọ igwefoto VirtualBox nke ọma maka n'efu site na saịtị ọrụ site na http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads ebe e si nweta nsụgharị maka Windows, Mac OS X na Linux. N'agbanyeghị na saịtị ahụ dị na Bekee, usoro ihe omume ahụ ga-abụ na Russian. Gbaa faịlụ ahụ ebudatara ma gaa site n'usoro nhazi ngwa ngwa (n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-ezuru ịhapụ ntọala niile).
Mgbe ịchọrọ nke VirtualBox, ọ bụrụ na ịhapụ ebe a nyere maka ịnweta Ịntanetị site na igwe arụmọrụ, ị ga-ahụ ịdọ aka ná ntị "Ịdọ aka ná ntị: Network Interfaces" na-adọ aka ná ntị na njikọ Ịntanetị ga-apụtụ nwa oge n'oge usoro ntọala (a ga-eweghachi ya ozugbo mgbe ọ nwụsịrị ndị ọkwọ ụgbọala na ntọala njikọ).
Mgbe ịchichachara, i nwere ike ịgba Oracle VM VirtualBox ọsọ.
Ịmepụta igwe arụmọrụ na VirtualBox
Rịba ama: igwe arụmọrụ chọrọ njedebe nke VT-x ma ọ bụ AMD-V na BIOS iji nyefee na kọmputa ahụ. A na-emekarị ya na ndabara, ma ọ bụrụ na ihe na-adịghị mma, tụlee nke a.
Ugbu a, ka anyị mepụta igwefoto mbụ anyị. Na ihe atụ dị n'okpuru ebe a, VirtualBox na-agba ọsọ na Windows na-eji dị ka os os os (onye a na-agbazi) ga-abụ Windows 10.
Pịa "Mepụta" na Oracle VM VirtualBox Manager windo.
Na "Kọwaa windo aha na ụdị os", kọwaa aha na-adịghị ike nke igwe kwadoro, họrọ ụdị os nke a ga-arụnye na ya na os os. N'okwu m - Windows 10 x64. Pịa Ọzọ.
Kọwaa ego nke RAM ekenyela na igwe gi. Dị ka o kwesịrị, ọ ga-arụ ọrụ, ma ọ bụghị nnukwu (ebe ọ bụ na a ga - ewepụ "nchekwa" site na isi usoro gị mgbe igwe kwalitere). Ekwadoro m ilekwasị anya na ụkpụrụ ndị dị na mpaghara "green".
Na windo na-esote, họta "Mepụta disk diski ohuru ohuru ohuru".
Họrọ ụdị diski. N'ọnọdụ anyị, ọ bụrụ na a gaghị eji diski disk a mee ihe n'èzí VirtualBox - VDI (VirtualBox Disk Image).
Kọwaa ikikere ma ọ bụ dozie nke diski ike iji. M na-ejikarị "Dezie" ma jiri aka tinye nha ya.
Kọwaa oke nke diski ike dị na ebe nchekwa ya na kọmputa ma ọ bụ mpụga (nha ga-ezu maka nhazi na ọrụ nke sistemụ arụmọrụ ọbịa). Pịa "Mepụta" ma na-echere ruo mgbe e mechara mepee disk disk ahụ.
Emeela, e mepụtara igwe mebere igwe ma gosipụta na listi na aka ekpe na windo VirtualBox. Ịhụ ozi nhazi ahụ, dị ka nseta ihuenyo, pịa akụ na nri nke bọtịnụ "Machines" wee họrọ "Nkọwa".
Otú ọ dị, e kere igwe arụmọrụ, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịmalite ya, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla ma e wezụga ákwà ngebichi oji na ozi ọrụ. Ee naanị "kọmputa a mebere emepe" ka e kere ugbu a ma ọ dịghị sistemụ arụnyere na ya.
Ịwụnye Windows na VirtualBox
Iji wụnye Windows, n'ọnọdụ anyị Windows 10, na igwe windo VirtualBox, ị ga-achọ ihe oyiyi ISO site na nkesa usoro (lee Otu esi budata ihe oyiyi ISO nke Windows 10). Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ndị a.
Tinye ntinye ISO n'ime iko DVD. Iji mee nke a, họta ngwaọrụ nke oma na listi aka ekpe, pịa bọtịnụ "Nhazi", gaa "Media", họrọ disk, pịa bọtịnụ na diski na akụ, wee họrọ "Họrọ oyiyi nke diski ikuku." Kọwaa ụzọ na oyiyi ahụ. Mgbe ahụ na ihe nhazi usoro System na ngalaba Boot Order, debe Disk Optical na mbụ n'ime ndepụta. Pịa OK.
Na windo nke ukwu, pịa "Gbaa ọsọ." Igwe ihe igwe mebere na mbụ ga-amalite, a ga-eme buut ahụ site na diski (site na oyiyi ISO), ịnwere ike ịwụnye Windows dị ka ị ga-eji kọmputa nkịtị. Nzọụkwụ niile nke nrụnye mbụ yiri nke ndị na kọmputa kọmputa, hụ Ịwụnye Windows 10 site na USB flash drive.
Mgbe arụnyela Windows ma na-agba ọsọ, ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ụfọdụ ga-ekwe ka usoro ndị ọbịa na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi (na-enweghịkwa mgbochi na-enweghị isi) n'ime igwe. Iji mee nke a, họrọ "Jikọọ bọtịnụ mgbakwunye VirtualBox" site na menu "Ngwaọrụ", mepee CD n'ime igwe kwadoro ma gbanye faịlụ ahụ VBoxWindowsAdditions.exe iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala a. Ọ bụrụ na onyinyo ahụ adịghị ada, mechie igwe kwadoro ma kwupụta ihe oyiyi ahụ C: Program Files Oracle VirBox VBoxGuestAdditions.iso na ntọala mgbasa ozi (dị ka ọ dị na nke mbụ) ma malitezie igwe arụmọrụ ọzọ, wee wụnye na diski ahụ.
Mgbe echichi zuru ezu ma megharịa igwe nke ọma, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, ị nwere ike ịchọ ịrụ ọrụ ụfọdụ.
Basic VirtualBox Mebere Machine Ntọala
Na ntọala igwe kwadoro (rịba ama na ọtụtụ ntọala anaghị adị n'oge igwemịkị na-agba ọsọ), ị nwere ike ịgbanwe ihe ndị na-esonụ:
Na "General" ihe dị na "Di elu" taabụ, ị nwere ike ịme ka paịlọnụ na nnukwu usoro na ọrụ Drag-n-Drop maka ịdọrọ faịlụ n'ime ma ọ bụ pụọ na os os.
Na mpaghara "System", iwu buut, ọnọdụ EFI (maka ntinye na disks GPT), ọnụ ọgụgụ nke RAM, ọnụ ọgụgụ nke cores processor (egosiputa ọnụ ọgụgụ karịa ọnụ ọgụgụ ụda anụ nke kọmputa gị) na pasent na-anakwere nke iji ha (ihe dị ala na-emekarị eziokwu ahụ bụ na usoro ọbịa "eme ngwa ngwa").
Na taabụ "ngosi" ahụ, i nwere ike ime ka ọganihu 2D na 3D, mee ka ọnụ ọgụgụ nchekwa vidiyo maka igwe kwadoro.
Na taabụ "Mgbasa Ozi" - gbakwunye draịva diski ndị ọzọ, disks siri ike.
Na USB tab, gbakwunye ngwaọrụ USB (nke ejikọtara ya na kọmputa gị), dịka ọmụmaatụ, eriri flash USB, na igwe arụmọrụ (pịa akara ngosi USB na akara aka na nri). Iji jiri USB 2.0 na USB 3.0 controllers, wụnye Oracle VM VirtualBox Extension Pack (dị maka nbudata n'otu ebe ebe ebudatara VirtualBox).
Na "Nchịkọta Mgbasa Ozi" ị nwere ike itinye mgbakwunye ndị isi os na igwe kwadoro ga-ekerịta.
Ụfọdụ n'ime ihe ndị dị n'elu nwere ike ime site na igwe arụmọrụ na-arụ ọrụ na nchịkọta nhọrọ: dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike jikọọ ọkụ USB USB na Ngwaọrụ, wepụ ma ọ bụ fanye disk (ISO), mee ka nchekwa nchekwa, wdg.
N'ikpeazụ, ụfọdụ ozi ndị ọzọ nwere ike ịba uru mgbe ị na-eji ọrụ VirtualBox arụmọrụ.
Otu n'ime njirimara ndị bara uru mgbe ị na-eji igwe mebere emepụta bụ ihe e dere "foto" (foto) nke usoro ahụ na ọnọdụ ya ugbu a (ya na faịlụ niile, usoro awụnyere na ihe ndị ọzọ) na ike ịlaghachi na steeti a n'oge ọ bụla (na ike ịchekwa ọtụtụ snapshots). Ịnwere ike ịchọta foto na VirtualBox na igwe na-agba ọsọ na ngwaọrụ - "Buru foto nke ala". Na weghachite njikwa njikwa site na ịpị "Ngwa" - "Snapshots" na ịhọrọ "Snapshots" taabụ.
A na-ejikọta isi mkpuchi ndabara site na sistemụ arụmọrụ kachasị (dịka ọmụmaatụ, Ctrl + Alt Del). Ọ bụrụ na ịchọrọ izipu obere ụzọ keyboard dị na igwe igwe, jiri "Tinye" menu ihe.
Igwe nwere ike "ijide" ndenye na keyboard na ntan (ka ị ghara ịfefe ọsọ ọsọ gaa na isi usoro). Iji "hapụ" keyboard na òké, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri igodo onye ọrụ (na ndabara, nke a bụ igodo Ctrl ziri ezi).
The Microsoft website nwere njikere-mere n'efu Windows mebere igwe maka VirtualBox, nke zuru ezu ibubata ma na-agba ọsọ. Nkọwa banyere otu esi eme nke a: Otu esi budata igwe Windows arụmọrụ n'efu na Microsoft.